Home Products DataNumen Outlook Repair Hangs fanamboarana Inbox
Fitaovana fanamboarana Inbox rehefa manamboatra rakitra PST simba na simba
Rehefa mampiasa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ianao hanamboarana rakitra efa simba na simba Outlook folder (PST), fa tsy manatanteraka ny asa fanamboarana, mihantona tsy miato ny fitaovana ary tsy mamaly ny baikon'ny mpampiasa. Raha manokatra Windows Task Manager ianao dia ho hitanao fa “Tsy mamaly” ny satan'ny fampiharana. Raha manidy ny fampiharana tsy ara-dalàna ianao ary restarRaha hanamboatra indray ilay rakitra mitovy dia hahazo valiny mitovy foana ianao.
Ny kolikoly na ny fahasimban'ny rakitra PST dia mavesatra be sy be pitsiny. Rehefa manandrana manamboatra ny fisie ny Inbox Repair Tool (Scanpst) dia hidina amin'ny tadivavarana maty tsy misy farany izany ary tsy afaka manamboatra ilay rakitra intsony.